သငျသညျအကြီးအအပြင်မှာတစ်ဦးကိုနှစ်သက် Are? ကျနော်တို့သစ်တောတွေပြောနေတာဖွင့်, ရေကန်များ, သစ်ပင်ပန်းမန်, နှင့်သတ္တဝါများ. တောင်တက်, စက်ဘီး, အထွေထွေလေကောင်းလေသန့်. ထိုအခါရှာဖွေတွေ့ရှိ ဥရောပ၌အလှဆုံးအမျိုးသားဥယျာဉ်, နှင့်မည်သို့ရထားအဲဒီမှာရဖို့.
သဘာဝအလျောက်လာရောက်လည်ပတ်သော်လည်း ဆွဲဆောင်မှု သစ်တောတွေတစ်ဦးအပေါ်ရှုပ်ထွေးနိုင်ပါတယ်ကဲ့သို့သော ရထားခရီး, သေသောသူတို့ကိုဖယ်ဖို့မအကြောင်းပြချက်င်. အဆိုပါသဘာဆွဲဆောင်မှုအတွက်အလုပ်ရှုပ်ဖို့ပြီးပြည့်စုံသောဆနျ့ကငျြဘပူဇော် မြို့ကြီးများ, သုတေသနအနည်းငယ်နှင့်, Save A Train ၏အကူအညီဖြင့်သူတို့ရောက်ဖို့အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အဆင်ပြေတာကိုသင်တွေ့လိမ့်မယ်.
ယင်း၏ရှုပ်ထွေးနာမတျော၏ကြားမှ, Saxon ဆွစ်ဇာလန်အမျိုးသားဥယျာဉ် အတွက်အလွန်ဖြစ်ပါသည် ဂျာမနီ. ၎င်းသည်ချက်သမ္မတနိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းနှင့်နယ်နိမိတ်ကျယ်ဝန်းသည့်သဘာဝဒေသတစ်ခုဖြစ်သည်. ဒါဟာတိုင်းပြည်ရဲ့သာရော့ခ်အမျိုးသားဥယျာဉ်ရဲ့, ဒါပေမယ့်လည်းထူးချွန်သစ်တောများဖုံးလွှမ်းမယ့်. လူများစွာသည်ထိုဒေသသို့ခြေလျင်ခရီးသွားကြသည်, ဒါပေမယ့်လည်းရှိပါတယ် စိတ်ဝင်စားဖွယ်သမိုင်း လေ့လာစူးစမ်းဖို့, အဆိုပါ Konigstein ခံတပ်အပါအဝင်.
သငျသညျဂျာမနီမှာနေနေစဉ်, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုလည်းသွားရောက်ကြည့်ရှုအကြံပြု Black ကသစ်တော. ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အလယ်ပိုင်းဥရောပရဲ့အကျော်ကြားဆုံးသစ်တော, ဒီလွဲချော်တမဟုတျပါဘူး. ဂျာမနီအနောက်တောင်ပိုင်းရှိဤအံ့မခန်းတောတောင်ထူထပ်သောဒေသတွင်၎င်း၌အမြဲစိမ်းသစ်တောများရှိသည်, အံ့သြဖွယ် တောင်များ, နှင့် quaint ကျေးရွာပေါင်း. ဒါဟာပြန် 1700 မှချိန်းတွေ့ cuckoo နာရီမှအိမ်ပြန်မယ့်, နှင့် ရွာများစွာ ဝေးကွာသောအချိန်၌စိတ်အားထက်သန်စွာမှီဝဲခံစားရတယ်. အဆိုပါ နတ်သမီးပုံပြင်-ပုံပြင်လေထု အစစ်အမှန်ကမ္ဘာမှအပြည့်အဝ ESCAP မှဿုံသူ့ဟာသူချေးငှားသည်, သောသင်ရှာနေတာရဲ့လျှင်!
ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ဦးက အတှေ့အကွုံ အဆိုပါ Black ကသစ်တောရထားဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါ Black ကသစ်တောလိုင်း Offenburg နှင့် Konstanz အကြားပြေး. ၎င်းသည် ဒေသနှင့် မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် မြင်ကွင်းများကို ပေးဆောင်သည်။ မြို့တော်တော်များများမှာ ရပ်တယ်။ လမ်းတစ်လျှောက်.
Hallerbos သစ်တော, သို့မဟုတ် "အဆိုပါအပြာရောင်သစ်တော", ရှည်လျားသောများအတွက်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်သစ်တောစုံလင်သည် ဇါတ်စင်နှင့်ဆိုင်သော ဘာ့ဂ်. ကျယ်လောင်သော bluebells ကော်ဇောများကပေါ်ထွက်လာသည် ဧပြီလလယ် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလှပသောသစ်တောကိုနာမည်ပေးကြသည်. ပွညျသူပွညျသားဤလှပသောလမ်းပိုင်းတစ်ဦးအလည်အပတ်တစ် rejuvenation အတွေ့အကြုံကိုစေကုမ္ပဏီကြီး Sequoia သစ်ပင်များလည်းရှိပါတယ်.
အဆိုပါ bluebells ဖမ်းရန် Hallerbos သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကွဲပြားခြားနားသည်နှင့်ရာသီဥတုအပေါ်မူတည်ကြောင်းမှတ်ချက်. အဆိုပါရှိရာသို့အလျင်အမြန်အပူချိန်မြင့်တက်, ရှိရာသို့အလျင်အမြန်အပွင့်ပွင့်. အခုတော့သွားကြဖို့အလွန်ကြီးစွာသောအချိန်ပါလိမ့်မယ်, ယခုနှစ်ဧပြီလလယ်ထက်အနည်းငယ်ပိုပူလာပုံရသည်. ဒါပေမယ့်အဖြစ်အချိန်ဆန့်ကျင်နေတဲ့အပြေးပြိုင်ပွဲရဲ့ ပူနွေးသောရာသီဥတု ထို့ပြင်သစ်ပင်များပြန်သူတို့ရဲ့အရွက်ရသည်ဟုဆိုလိုသည်, နေရောင်ခြည်၏ bluebells မှု, သောသူတို့အား grayish turn စေသည်. သင့်ရဲ့အဘို့အဘယ်သူမျှမကအကောင်း Instagram ကို pics!
သငျသညျဆိုရင် စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း ရှည်လျားသောခရီး, တစ်ဦးထုပ်ပိုးရန်သေချာစေပါ ငါးမြှားတံ: ဒီမှာရေကိုငါးနှင့်အတူ teeming နေကြတယ်. Reindeer ပရိသတ်များသည် Hardangervidda သည် ၎င်းတို့အတွက် အကောင်းဆုံး အမျိုးသားဥယျာဉ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိမည်ဖြစ်သည်။, ယင်း၏နွားများကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးတချို့ရှိနေပါတယ်အဖြစ်. အတော်လေးလွင်ပြင်ကိုဖြတ်ပြီးအညီ reindeer ပါပြောင်းရွှေ့ထောင်ပေါင်းများစွာ၏စောင့်ကြည့်တူသောဘာမှမရှိဘူးင်; ဒါကြောင့်သူတို့ဘဝအတွက်တစ်ချိန်ချိန်လူတိုင်းမြင်ရပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးမျက်မှောက်င်.
သငျသညျအော်စလိုနေပြီးတာနဲ့, သင်လိုအပ် ရထား Hardangervidda ရ သငျသညျ Telemark အတွက်အော်စလိုကနေဘိုမှရထားယူနိုင်ပါသည်. ထိုအရပ်မှသင်တို့ကိုအမီလိုက်နိုင်ပါတယ် “Haukeliekspressen” Rauland မှ. သင်တို့သည်လည်းအော်စလိုကနေ Hardangervidda ရှာဖွေစူးစမ်းအဘို့ကြီးသောစတင်အချက်များဖြစ်ကြောင်းနေရာများကိုနံပါတ်ဖို့ဘာဂန်မီးရထားယူနိုငျသညျ - Myrdal မှ Flam, ဖင်လန်, Haugastol, Ustaoset, နှင့် Geilo.
ဘာဂန်ကနေ Hardangervidda မှရထား, Bergen မီးရထားသည် Hardangervidda - Myrdal ကိုစူးစမ်းလေ့လာရန်အလွန်ကောင်းသောအချက်များဖြစ်သောနေရာများစွာတွင်ရပ်သည်။, ဖင်လန်, Haugastol, Ustaoset, နှင့် Geilo. သင်တို့သည်လည်း Voss ထံမှ Eidfjord မှ Voss မှရထားနှင့်ဘတ်စ်ကားယူနိုင်ပါသည်.
#Reindeer ပရိသတ်များသည် Hardangervidda သည် ၎င်းတို့အတွက် အကောင်းဆုံး အမျိုးသားဥယျာဉ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိမည်ဖြစ်သည်။	#Reindeer ပရိသတ်များသည် Hardangervidda သည် ၎င်းတို့အတွက် အကောင်းဆုံး အမျိုးသားဥယျာဉ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိမည်ဖြစ်သည်။	#Reindeer ပရိသတ်များသည် Hardangervidda သည် ၎င်းတို့အတွက် အကောင်းဆုံး အမျိုးသားဥယျာဉ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိမည်ဖြစ်သည်။	europetravel	ရထားခရီးရှည်များ	ရထားခရီးသွား	ခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ	ခရီးသွားများ	.ရာဝတီ	ခရီးသွားအကြံပြုချက်များ